भिगेनको उपकरणबाट थेरापी - प्रश्नोत्तर - प्रकाशितः फाल्गुन ११, २०७८ - नारी
फाल्गुन ११, २०७८ दक्षिण कोरियाली कम्पनी ‘भिगेन मेडिकल’ ले नेपालमा ‘बिटिफिक स्पा’ मार्फत आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले उत्पादन गर्ने चिकित्सकीय उपकरणबाट नेपालमा निःशुल्क थेरापी सेवा दिने गरेको छ । उपकरण र थेरापीबारे स्पाका सञ्चालक मेचीबादे श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी :
भिगेनको थेरापी उपकरणबारे केही बताइदिनुस् न ?
थेरापी कसरी संचालन गरिरहनुभएको छ ?
थेरापी दुई तरिकाले सञ्चालन गरिरहेका छौं । आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएकाहरूलाई सशुल्क र विपन्नहरूलाई निःशुल्क सेवा दिन्छौं ।
थेरापी क–कसका लागि उपयोगी छ ?
विशेषगरी मेरुदण्ड, मिर्गौलासम्बन्धी समस्या, हातखुट्टा, कम्मरको दुखाइ, रक्तचाप र मुटुसम्बन्धी समस्याहरू, पायल्स, ग्यास्ट्राइटिस, कब्जियत, टन्सिल, थाइराइड, मोटोपन, मधुमेह, प्यारालाइसिस, निद्रा नलाग्ने एवं प्रोस्टेटका समस्या, हाडजोर्नी तथा नसासम्बन्धी समस्या, निमोनियाँ, एलर्जी, माइग्रेन, पाठेघर, महिनावारीको समस्या हुनेहरूका लागि उपयोगी छ । हरेक उमेर समूहले यो सेवा लिन सक्छन् ।
तपाईंको कम्पनीको थेरापी सेवा कहाँ उपलब्ध छ ?
थेरापी स्पामा वा आफ्नै घरमा मेसिन राखेर पनि गर्न सकिन्छ । यसका सामानहरू केही महँगा छन् । जस्तै ‘इटियस म्याट’ को मूल्य एक लाखजति पर्छ । पछिल्लो समय यो म्याटको लोकप्रियता बढ्दो छ ।
यो ‘इटियस म्याट’ के हो ?
यो कम्पनीका विभिन्न थेरापीका मेसिन छन् । यसका विभिन्न मोड हुन्छन् । अटो, म्यानुअल तथा मसाज मोड आदि मोडहरूबाट सेवा लिन सकिन्छ ।